PB Dhaddigga Dumar Elbow - Shiinaha Amico
Astaamaha tuubooyinka Amico PB, tuubada waxqabadka kiimikada waa xasilloon tahay, iska caabin saqaf ah, waxay muujineysaa yaraanta tuubooyinka birta ee wajigan. 2, Way fududahay in la leexiyo ama diirima kulul si ay u ahaato qaab adag, oo leh awood isku cadaadis wanaagsan oo ku xirma tuubooyinka, ma fududa in la daadiyo. 3, Badbaadinta maalgashiga - maalgashiga bilowgiisu waa balaaran yahay, laakiin kharashka hawlgalka oo yar, caasimada maalgashiga ayaa laga soo kaban karaa waqti gaaban. . 4, Tuubbada kuleyliyaha dhulka hoostiisa kuleylku adeegsadaan tuubada polyetylen-ka sareeya. Nolosha adeegga ee 50 aad ...
MOQ: 5000m / kumbuyuutar
Dekad gaarsiinta: Ningbo ama Shanghai
Muddada bixinta: TT ama LC
Nooca: Amico ama OEM
Waxyaabaha Cayriin: Basell
Midab: Ivory, Grey, sidii codsi ahaan
Nala soo xiriir U soo degso sidii PDF
Tilmaamaha tuubooyinka Amico PB
1, Waxqabadka kiimikada tuubada ayaa ah mid deggan, iska caabin xididnimo, dib u dhac ku filnaanshaha tuubooyinka birta ee wajigan.
2, Way fududahay in la leexiyo ama diirimaadka kulul si uu u noqdo qaab adag, oo leh awood isku cadaadis wanaagsan oo ku xirma tuubooyinka, ma fududa in la daadiyo.
3, Badbaadinta maalgashiga - maalgashiga bilowgiisu waa balaaran yahay, laakiin kharashka hawlgalka oo yar, caasimada maalgashiga ayaa laga soo kaban karaa waqti gaaban. .
4, Tuubbada kuleyliyaha dhulka hoostiisa kuleylku adeegsadaan tuubada polyetylen-ka sareeya. Nolosha adeegga muddo 50 sano ah.
5, Ilaalinta deegaanka iyo keydinta tamarta: isticmaalka korontada, majiro wax gubitaan ah, sida deegaanka ku xeeran, siidayn la’aan; Uma baahnid inaad isticmaasho munaaradaha qaboojinta, ha haysan meel banaanka ah oo ka baxsan, ha kululeeyn kuleylka deegaanka ku xeeran,
Majirto saameyn kuleyl kuleyl, buuq; Ha soo bixin biyaha dhulka hoostiisa, adigoon burburin ilaha biyaha dhulka hoostiisa; Kaliya waxay ku kacaysaa 40 ~ 60% kaliya qaboojinta hawada dhexe.
1. Kharashaadka tamar hoose iyo saameynta bey'ada - Nidaamka juquraafiyada wuxuu isticmaalaa koronto ka yar 25-50% ka yar kuleyliyaha qasabka ah ama nidaamyada qaboojinta. Tan macnaheedu waa tamarta yar ee looga baahan yahay gubista shidaalka shidaalka ee waxyeelada u leh deegaanka.
2. Biyo kulul oo Bilaash ah ama Raqiis ah - oo ka duwan nooc kastoo kale oo kuleyl iyo qaboojin ah, mashiinka kuleylka loo yaqaan 'geothermal kuleylka' waxay ku siin karaan biyo kulul kullan iyagoo adeegsanaya aalad loo yaqaan "desuperheater".
3. Raaxo Sanad-wareega - waxay joogteysaa heer heerkul ah iyo qoyaan badan gurigaaga oo buuq aad u yar ka jiro.
4. Dabacsanaanta Naqshadeynta - Nidaamyada kuleyliyaha tamarta dhulka ayaa u oggolaanaya dabacsanaanta naqshadeynta waxaana lagu dhejin karaa labadaba xaaladaha cusub iyo gadaal u soo kabashada.
5. Qalabka suuxinta ee la hagaajiyay - nidaamyada tamar-dhuleedka ayaa fudud in la qariyo, uma baahna munaarado qaboojinta, baabi'inta qalabka caadiga ah ee saqafka, dayacnaanta daadadka iyo dayactirka socda, dammaanad saqafka saqafka wanaagsan, u oggolaanaya naqshadeeyayaasha iyo milkiilayaasha dhismuhu inay qorsheeyaan naqshadaha naqshadeynta qaab dhismeedka wanaagsan ee ugu wanaagsan. Khadadka saqafka.
6. Dayactirka hooseeya - maadaama qayb ka mid ah qalabka shaqada - tuubbada - ay tahay dhulka hoostiisa ama biyaha hoostiisa, waxaa jira baahi yar oo dayactir ah.
7. Kuleylka kululaynta iyo qaboojinta - aagagga kala duwan ee dhismaha ayaa loo kululayn karaa ama lagu qaboojin karaa heerkul kaladuwan isku mar, ie, kuleylka ka imanaya qolalka kumbuyuutarrada waxaa loo wareejin karaa darbiyada wareega ee kuleylka dhismayaasha ganacsiga.
8. Joogteyn - iyada oo aaney jirin qeybo dhaqdhaqaaq ah, iyo qeybo ku go'an guri dhisme, nidaam kuleyliyaha juquraafigu waa mid waara oo aadna loogu kalsoonaan karo. Dhuumahayagu waxay leeyihiin filasho nololeed illaa 50 sano ama ka badan.
Amico ama OEM
Sida codsiyada macmiilka
Dhumucda darbiga caadiga ah:
Ugu yaraan 50 sano noloshooda marka loo eego xaaladaha caadiga ah
S: Waa maxay maadada cayriin?
A: 100% shey saafi ah oo cusub oo ka sameysan Basell, dib u adeegsi ma jiraan
J: Ku tiirsanaan cabir kala duwan. Fadlan ka hubi iibka.
S: Waa maxay awooda wax soo saarka? Mise waqtiga dhalmada?
A: Caadi ahaan 15ka maalmood ee hal 40HQ weelka
S: Waa maxay dekedaha caadiga ah ee dhoofinta?
A: Ningbo ama Shanghai
S: Waa maxay lacagtaadu?
A: 30% hoos u dhigida lacagta, dheelitirka ka dhanka ah BL Nuqulka ama Cudurdaarka L / C
S : waxaad soo saari karaa sida uu tijaabada?
A: Haa, waxaan ku soo saari karnaa samballadaada ama sawirro farsamo.
S: Ma tijaabisaa alaabtaada oo dhan kahor umulinta?
A: Haa, waxaan baarnaa 100% baaritaan kahor umulinta
S: Waa maxay siyaasadda muunaddaadu?
A: Muunad bilaash ah ayaa la heli karaa
S: Maxaad noo dooratay?
(1) Cuntada dhabta ahi waxay soo saartaa tayo aad u wanaagsan iyo qiimo tartan ah.
(2) La shaqaynta macaamiisha adduunka oo dhan iyo garashada suuqyada si wanaagsan.
(3) Adeegyada Kadib kadib ayaa si aad ah loogu qanci doonaa. Wixii dhibaato ah iyo jawaab celin ah waxaa looga jawaabi doonaa waqti gaaban.
Hore: PB 90 ° Elbow
Xiga: PB Tee
PB Pipe ee Biyo Siinta
PB Lab thread Tee